FANAMBARAN’ANDRIAMANITRA NY TENANY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 18, 2016 Laisser un commentaire sur FANAMBARAN’ANDRIAMANITRA NY TENANY
“Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona Izy” (Asan’ny Apostoly 14:17)
Ao amin’ny tantara iray nosoratan’i Feodor M. Dostoevsky mitondra ny lohateny hoe ‘Karamasov miarahalahy avy”, dia voalaza fa ny anankiray amin’ireo mpirahalahy ireo dia mitonon-tena ho tsy mino an’Andriamanitra. Kanefa, mandrakariva izy dia miresaka ny momba an’Andriamanitra.
Mety mihatra amin’ireny olona izay manondro ny tenany fa tsy mino an’Andriamanitra etsy sy eroa ireny koa izany. Ankalazainy fa tsy misy Andriamanitra, anefa dia miasa mafy izy ireo hanamarina izany. Angamba, niezaka izyhametraka an’Andriamanitra ao anaty vatakely, dia ao amin’ny fisainany maha-olombelona izany. Rehefa tsy hainy ny nanao izany, dia notohizany hatrany ny fandavany ny Fisiany. Mandrak’ankehitriny dia marina izay voalazan’i Davida ao amin’ny Salamo 14:1 manao hoe: “Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra”. Ny olana natrehin’i Paoly sy ireo mpiara-miasa taminy nandritra ny dia misionery izay nataon’izy ireo dia tsy ny tsy-finoana loatra, fa ny fanompoan-tsampy. Tao Lystra ohatra, toerana iray izay nanasitranan’i Paoly lehilahy anankiray nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afa-namindra, dia nihevitra ny vahoaka fa Merkory sy Jopitera no nidina tety an-tany naka endrik’olona, tao amin’i Paoly sy Barnabasy. Fa ireo Apostoly kosa dia nampianatra fa Andriamanitra dia nanambara ny tenany ho ilay mpamatsy azy ireo amin’ny hanina sy izay zavatra hafa nilainy. Ankoatry ny fanehoan’ Andriamanitra ny Tenany ao amin’ny zava-boary, dia nampahafantatra ny Tenany ao amin’ny Soratra Masina Izy. Azo antoka ny Teniny ao amin’ny Baiboly fa Izy no ilay Ray any an-danitra izay nandefa ny Zananilahy mba hanavotra antsika amin’ny fahotana sy ny famaizana (na sazy) tandrify izany, ka handray antsika ho zanany. Amin’ny alalan’ny Filazantsara sy ireo Sakramenta, ny Fanahy Masina dia mitondra fanambarana ao am-pontsika fa, rehefa mino an’i Kristy ho Mpamonjy antsika isika, dia vita fihavanana amin’Andriamanitra.
Tsy manana anjara toerana ao amin’izay mety ho fivavahana ny olon-tsy mpino. Ny mpanoratra ny epistily ho an’ny Hebreo dia manambara: “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka Aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” (Hebreo 11:6).
Publié parfilazantsaramada mai 18, 2016 Publié dansUncategorized